မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကို USB အားသွင်းခြင်း
Car chargers များသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ကားဘက်ထရီများမှမောင်းနှင်သည်။ ၎င်းတို့တွင်ကားများမှာ 12V နှင့်ထရပ်ကားများမှာ ၂၄ V ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအမျိုးမျိုးသောခရီးဆောင်နှင့်လက်ကိုင်ပစ္စည်းများအတွက်လီသီယမ်ဘက်ထရီအားသွင်းရာတွင်အသုံးပြုကြသည်။
Car chargers must not only consider the actual needs of lithium batteries, but also take into account the efficiency of the car battery in harsh environments. Therefore, the charger power management IC needs to be equipped withahigh-voltage, high-efficiency, high-reliability, and low-frequency chip. The straightforward statement is "stable and resistant to manufacturing".
လွန်ခဲ့သော:Will the car battery be damaged if the car charger has been plugged into the cigarette lighter?
နောက်တစ်ခု:ကား charger ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ။
Copyright 2020 Hongkong Ing Ideal Electronic Co. , ကန့်သတ်ထားသော - ဘတ်စ်ကားအားသွင်းခြင်း၊ ကားအားသွင်းခြင်း၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ် USB အားသွင်းခြင်း - All Rights Reserved ။